Dr. Cabdiweli Gaas: Dr. Gaas waa shaqsi siyaadada Soomaaliya ku soo biiray kadib markii Ra’iisal Wasaare Farmaajo oo saaxiibna ay ahaayeen Tuulo Buffalo la yiraahdo oo Maraykankan ku taalna daris ku ahaayeen uu u magacaabay Wasiirka Qorshaynta iyo Xiriirka Caalamiga ah. Kadib wuxuu noqday Ra’iisal Wasaare shaqsigii shaqada siiyay xilka kala wareegay. Wuxuu u tartamay Madaxweynenimo wallow uusan ku guulaysay. Ugu danbayn wuxuu isku sharaxay Madaxweynenimada Puntland isagoo campaign slogan kiisu ahaa isbedel, odhaahdaas oo noqotay mid ka turjuntay dareenkii shacabka una saamaxday inu hal cod kaga adkaado madaxweyne Faroole. Hadaba waxaa isweydiin mudan waxa laga dhaxlay ama lagu xusuusan doono Madaxweyne Gaas!